Skunk Mbeu dzakasarudzika | MyWeedSeeds.com
Skunk Special mbanje ndiko kugadziridzwa kwekupedzisira kweSkunk # Imwe. Iyo yekutanga Skunk yakayambuka ine sativa yechisingazivikanwe mavambo, uye sarudzo yakaitwa kubva chete yakanakisa yezviuru zvezvirimwa. Skunk Special inochengetedza hunhu hwayo skunk ichiwedzera sativa yakasimba kumusoro. (Kunhuwirira kwayo kunoita kuti zvimuomere kutakura, saka chenjera.) Skunk Special chirimwa chakasimba uye chine simba chinoburitsa gohwo rinoshamisa zvine hurefu hwehurefu hwacho. Iwe hausi kuzoona misiyano yakawanda pakati pezvirimwa - igwara rakagadzikana. Anosarudza kukura kunze, uye hunhu hwake huri nyore hunomuita iye sarudzo yakanaka kune varimi vechidiki. Kana iwe uri wechokwadi Skunk mudiwa wembanje, uyu ndiwo musiyano iwe. Kunyangwe iwe uchikwesha kurwisa zvinomera zvinokura, iwe unowana yakasimba skunky hwema. Kunhuwirira kwake uye kuravira ndokwechokwadi kwaari Skunk mavambo. Kukwirira kwaro kwakadzika, asi kunosanganisira buzz yakazara nematombo.